ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုအရူးအမူးချစ်မိတာကြောင့် ဘဝပျက်သွားတဲ့ ဆာမူရိုင်း !!!!! - JAPO Japanese News
ကြာ 23 Jul 2020, 14:50 ညနေ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း ဆာမူရိုင်းတွေအများအပြားရှိခဲ့တဲ့ ခေတ်..
အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ဆာမူရိုင်းတွေက မိန်းကလေးတွေကိုဆိုပြောမနေနဲ့၊ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပါ sexual relationships ရှိတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေ လက်ချိုးရေလို့မရတာကို သိကြပြီးပါပြီးလား?
男色（だんしょく） လို့ခေါ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဆာမူရိုင်းတွေထဲမှာ နယ်ပယ်အသီးသီးက ထိပ်တန်း၊ Lord class ဆာမူရိုင်းတွေမှာ ပိုပြီးများပါတယ်။
“ ကျုပ်ကကြီးမြတ်တဲ့အတွက် ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ် !”
ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ တိုက်ပွဲမှာမိမိအသက်ကို စောင့်ရှောက်ပေးမယ့်တစ်ဖက်လူရဲ့အရာအားလုံးကို သိထားချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပါလို့ ပြောသော်လည်း၊
ယောက်ျားလေးတွေကိုပိုကြိုက်တာလားလို့မေးကြည့်ရင် ၊ ဒါဟာအခြေအနေကောင်းလို့ပါ ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေကလွဲပြီး ဘာမှကြားရမှာမဟုတ်ပါဘူး..
အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေက မျက်မှောက်ခေတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေ စဥ်းစားလို့မရနိုင်တဲ့အထိ လွတ်လပ်စွာနဲ့ ချစ်ကြကြိုက်ကြ ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲကမှ ချောမောတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းမိပြီး မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့် နာမည်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နာမည်ကတော့ 蘆名盛隆（あしな　もりたか）Ashina Moritaka ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tohoku ဧရိယာမှာ အခြေစိုက်စခန်းချခဲ့တဲ့ ဆာမူရိုင်းဖြစ်ပြီး၊ အမြဲတမ်း ငယ်ရွယ်တဲ့ယောကျ်ားလေးတွေဆို ချက်ချင်းချစ်ကြိုက်မိသွားတာကြောင့် နာမည်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပုံရပါတယ်.
အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ဂျပန်ဟာ လက်ရှိခေါ်တဲ့ စီရင်စုတွေပေါင်းစည်းပြီး 藩（はん）Han ဆိုတဲ့ ဧရိယာခွဲလိုက်ပါတယ်။
藩 Han အသီးသီးမှာလည်း ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် သခင်တွေရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး အဲ့ဒါကိုစုစည်းထားတဲ့နေရာမှာတော့ ဧကရာဇ်ဆိုပြီး ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ဘယ်သူကဒီတိုင်းပြည်ကို အစိုးရလိမ့်မလဲဆိုပြီး အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ ခေတ်လည်းဖြစ်ကာ၊ အနီးအနား 藩 Han ကနေ ဘယ်တော့ စစ်ချီလာမလဲဆိုတာကို သတိရှိစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပြီး မိမိရဲ့နယ်မြေအတိုက်အခိုက်မခံရ‌အောင် လုပ်ရတဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်၊ ၂ ဦး ၂ ဖက် ဂတိကိုအာမခံတဲ့အနေနဲ့ ၊ ကလေးကိုဓားစာခံအဖြစ်အပ်နှင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုပြောပြမယ့် ဆာမူရိုင်း 盛隆 Moritaka ဟာလည်း ကလေးကိုဓားစာခံအဖြစ်အပ်နှင်းတဲ့ခေတ်အချိန်ကာလမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို 盛隆 Moritaka ရဲ့ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းရောက်လာပါတော့တယ်။
盛隆 Moritaka ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကတော့ …….
盛隆 Moritaka ဟာ ပေးအပ်ခြင်းခံရတဲ့ 蘆名 Ashina အိမ်တော်သခင်က ကလေးမရှိဘဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရောဂါကြောင့်သေဆုံးရတော့မယ့် အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။…
အဲ့ဒီအချိန် ဂျပန်ဟာ မိဘရဲ့အလုပ်ကိုသားသမီးက လက်လွှဲယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ကလေးမရှိဘဲသေသွားမယ်ဆို သူပိုင်တဲ့ 藩 Han ဟာလည်းပျောက်ကွယ်သွားမယ်…
ဒါကြောင့်ပဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် 盛隆 Moritaka ကိုမွေးစားလိုက်ပြီး ဒီ 藩 Han ကိုအုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။
盛隆 Moritaka ဟာတော်တော်လေး ရုပ်ရည်ချောမောတယ်လို့အများကသိကြတဲ့အတိုင်း၊ စစ်ပွဲထဲမှာပဲ ခေါင်းဆောင်ချင်းချစ်မိပြီး မေတ္တာရှိကြောင်းစာကို ပေးကာ၊ နောက်ဆုံးမှာ အဲ့ဒီစာကြောင့်ပဲ စစ်ကျေအေးသွားတဲ့ အံ့သြစရာကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
盛隆 Moritaka ဟာ ချက်ချင်း၊ မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။…..
တစ်နေ့သောအခါမှာတော့ လက်အောက်ငယ်သားရဲ့သားဖြစ်သူ 松本行輔（まつもと　ゆきすけ）Matsumoto Yukisuke ကပထမဆုံး စစ်ပွဲထဲမှာပါဝင်ဖို့လာနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်…. စစ်ပွဲမှာသေသွားခဲ့ရင် နှမြောစရာကောင်းတဲ့အချောလေးပဲလို့ ဆုံးဖြတ်ကာ အိမ်ပြန်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့…..
行輔 Yukisuke ဟာ စစ်တိုက်ပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားချင်တာတောင် တိုက်ပွဲမဝင်ရတဲ့အတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ၊ 栗村盛胤（くりむら　もりたね） Kurimura Moritane ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန် သူတို့ ၂ ယောက်အသွေးအသားချင်းဆက်ဆံမှုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကို 盛隆 Moritaka တစ်ယောက် သိသွားတဲ့အခါမှာတော့၊ အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကာ၊ ၂ ယောက်လုံးကို သတ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် လက်အောက်ငယ်သားရဲ့ တားလိုက်နိုင်မှုကြောင့် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
အကြီးအကျယ် ဂယက်ထလာတဲ့ဒီကိစ္စမှာ နောက်ဆုံးသူတို့ ၂ ယောက်ဟာ နိုင်ငံတော်ကိုပုန်ကန်ပြီး 盛隆 Moritaka လက်ချက်နဲ့ပဲသေသွားခဲ့ရပါတယ်။
အဲ…. အချစ်ကြောင့်ဆိုပေမဲ့လည်း…..မှားယွင်းခဲ့တဲ့ ၂ ယောက်လုံးဟာလည်း ယောက်ျားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂယက်ထမှုကြောင့် ယောက်ျားချင်းဆက်ဆံမှု ရပ်တန့်သွားမလားလို့ထင်မိသော်လည်း ၊ မရပ်တန့်သွားဘဲ၊ ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ဆုံလိုက်တိုင်း 盛隆 Moritaka တစ်ယောက် အမြတ်ထုတ်လာပါတော့တယ်။
မနာလိုမှုကြောင့် ပိုပိုဆိုးလာတဲ့ 盛隆 Moritaka ဟာ နောက်ဆုံး အသက် ၂၄ နှစ်၊ ငယ်ရွယ်တုန်းမှာပဲ လုပ်ကြံခံလိုက်ရပါတယ်။
အရိုက်အရာဆက်ခံမယ့် သားသမီးလည်းမရှိတဲ့အတွက်၊ 蘆名 Ashina အိမ်တော်ဟာကျဆင်းသွားပြီး ပျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာချစ်နိုင်ပေမဲ့၊ လူတိုင်းကိုအမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ ဒါဟာ ဥပမာပဲဖြစ်ပါတယ် !!!!!
လေလည်မိတဲ့အာဃာတကြောင့် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ စစ်သည်တော် !!!
ရှိုးဂန်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ညများ
ဂျပန်လူမျိုးတွေပဲဖြစ်တဲ့ ပါရီ (Paris) ရောဂါဆိုတာ?
ဝိတ်လျှော့လိုသူတွေအတွက် VR လာပါပြီ
အကြံ့ခိုင်ဆုံး Kumamoto ရဲတိုက်ဟာ စားစရာတစ်ခုလား ?!!!!
ဖြိုးပြောပြတဲ့ ဂျပန်အကြောင်းအရာ အပိုင်း(၃)
သခင်သေတဲ့အခါလိုက်ပြီးသတ်သေခြင်းကို တားဆီးနိုင်ခဲ့သူအမျိုးသား !!
အိုဆာကာရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြီးစားစက်ယန္တရားကြီး လူနေအိမ်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့
ဆောင်းဦးတွင် လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု !!